Xildhibaan Godax “Masjid dhisan 800 oo sano in la dumiyo si loo dhiso mid kale oo casri ah, waxaa ay lamid tahay Dhaqan-Dumin” – Kalfadhi
Xildhibaan Godax “Masjid dhisan 800 oo sano in la dumiyo si loo dhiso mid kale oo casri ah, waxaa ay lamid tahay Dhaqan-Dumin”
Xildhibaan Godax Bare oo sidoo kale ah Wasiirka Waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, ayaa shalay ka hor jeediyay Xildhibaannada Golaha Shacabka Akhrinta 1aad ee Axdiga ilalinta Hanti- Dhaqameedka Xiliyadda Colaada.
Xildhibaanka ayaa si qota-dheer oo tusaallooyin leh u aqriyay axdiga, isagoonna sheegay intii dalka Soomaaliya uu bur-bursanaa in la lumiyay waxyaabo badan oo dhaqanka ku saabsan, halka uu sheegay qeyb-kamid ah hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed in uu yaallo waddamada deriska iyo dalal uu kamid yahay Talyaaniga.
Xildhibaanka ayaa sheegay marka Soomaaliya ay nabad-noqoto in dib-loo-soo celin doonno dhammaan hanta-dhaqameedka.
“Waxaad tusaale usoo qaadataa, masjidka Arbaca Rukun ee ku yaalla Muqdishu, oo lagu qiyaasay in uu jiro inkabadan 800 oo sano, haddii manta la yiraahdo, masjid yar oo qurxan ayaa laga dhisayaa isaganna waala duminayaa, taas waxaa ay noqoneysaa dhaqan-dumin. Waxyaabaha la xafidaayo ayey kamid tahay”, ayuu yiri.
Haddii la doonayo in masjid qurxan oo casri ah la dhiso, waa in meel kale laga dhisaa, ayuu sii raaciyay.
Dhinaca kale, waxaa uu sheegay in taallooyinka ay kamid yihiin, waxyaabaha taariikhiga ah, in la xafidana waa muhiim, ayuu yiri.
“Waxaan rajeynayaa in golaha sharafta leh uu ansixiyo heshiiskan iyo labo heshiis oo kale oo aan horay u hor-geynay, kuwaas oo kaalin ka qaadan doona dib u soo nooleynta, ilaalinta iyo horumarinta dhaqanka”.
Magaaladda Mogadishu, waxa ku yaalla masaajid badan, oo dhisan ku-dhowaad kun sanadood, waxaana kamid ah masjidka Xaaji Cali ee ku yaalla kawaanka malaayga ee Xamar-weyne, iyo kuwo kale.
Sharciga Dakhliga maka hadlayaa qeyb-siga dakhliga iyo dhismaha hay’adda Canshuurta?